भारतीय ह्याकरद्वारा नेपाल प्राधिकरणको वेबसाइट ह्याक गरी राखे आफ्नो झण्डा ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/भारतीय ह्याकरद्वारा नेपाल प्राधिकरणको वेबसाइट ह्याक गरी राखे आफ्नो झण्डा !
भारतीय ह्याकरद्वारा नेपाल प्राधिकरणको वेबसाइट ह्याक गरी राखे आफ्नो झण्डा !
काठमाडौं । भारतीय ह्याकरहरुले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)को वेवसाइट ह्याक गरेका छन्। ‘घोष्ट ००५७_५पि३सी७०६’ नामक ह्याकरहरुको समूहले प्राधिकरणको वेबसाइट ह्‍याक गरेपछि भारतीय झण्डा पनि राखिदिएका छन्। ह्याकरले ट्विटरमार्फत् ह्याक गरेको जानकारी दिएका हुन। ह्याक गरेको सूचना पोष्ट गरेको ४५ मिनेटभित्रै साइट ह्याकर पहुँच बाहिर आइएको थियो। तर, फेरि साइट ह्याक भएको छ।
भारतीय ह्याकरको समुहले नेपाली ह्याकरहरुको समुहले सम्झौता उ’ल्लंघन गरेको आ’रोप लगाएको छ। तर, नेपाली पक्षले सम्झौता उ’ल्लंघन नगरेको जनाएको छ। यसअघि दुवै पक्ष ह्याक नगर्न सहमत भएका थिए।
दाईले आफनै बहिनिलाई क’रणी गरे, पाल्पा बाट बाहिरियो यस्तो खबर बहिनीले रु’दै लगाइन दाई माथि आ’रोप(भिडियो)